Uzama inhlanhla kwiSwallows owaduma kwiDowns
UJABULANI Shongwe ezingamuhambelanga kahle izinto kwiHighlands Park. Isithombe: Sydney Mahlangu/ BackpagePix
POTSHOZA | August 21, 2019
UTHUSHUKE ejimini yeMoroka Swallows uJabulani Shongwe osenesikhathi ethungatha ikhaya elisha kusukela echithwe yiChippa United.
UShongwe, oqale ukugqama kwi-Als Puk Tawana eyamangaza abaningi kwiNedbank Cup eminyakeni edlule, akazange afinyelele ezingeni abelindeleke ukufika kulona.
Lo mdlali oke wadlala kwiBidvest Wits nakwiLamontville Golden Arrows ayebolekisiwe kuyona, bekubukeka sengathi uzoqhubeka nomsebenzi kwiHighlands Park (abesemabhukwini ayo ngesizini edlule) kodwa sekuvela eleSwallows.
UShongwe okwakubhekwe nokuthi aye phesheya kwezilwandle ngendlela akhombisa ngayo ikhono elinzima emncane, uzama ukubuyisa izinsuku zakudala kuleli qembu elisanda kubuyela esigabeni esiphakela esikhulu iGladAfrica Championship eqale ngeledlule.
Umngani kaPotshoza ongaphakathi kwiSwallows upotshoze lezi zindaba kodwa wakucacisa ukuthi umuntu ophethe ukhiye wumqeqeshi uZeca Marques.
“Ukhona impela uyazilolonga neqembu esikhungweni salo eBedfordview, eGoli. Akukacaci nokho ukuthi uzosayiniswa noma uzochithwa yini. Nomqeqeshi uthule akakhombisi izimpawu zokuthi uchazekile noma cha.
Sekungumlando ukuthi noRooi Mahamutsa wodumo kwi-Orlando Pirates, ubeziqeqesha neSwallows ngenhloso yokuthola ikhaya elisha kwazise udliwe yizembe neFree State Stars ngesizini edlule. Kugcine kungamlungelanga lo mdlali waseMpumalanga Province.
BUKA: Isimanga sethuna phakathi eklasini
Ulwela indodana yakhe eboshelwe icala 'engalenzanga'
Imvunge ngegama elisha lebandla loNyazilwezulu
Indoda idutshulwe iyolalela icala nomkayo
Bavulele ugobela icala locansi